आजको अखिल ब्यक्ति केन्द्रित कि मुद्दा ? - JanataPatra
आजको अखिल ब्यक्ति केन्द्रित कि मुद्दा ?
१४ भाद्र २०७७, आईतवार १५:३३ August 30, 2020 Janatapatra
रबि भण्डारी ।
‍‍‍गौरबपुर्ण ईतिहास बोकेको अनेरास्ववियृ किन दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै छ । कमिटीको बैठक त्यसले निकालेका निष्कर्ष बोक्नु पर्ने हैन र ? आज जसले जस्तो तर्क राखेर अराजकता मच्चाए पनि त्यसले कदापी संगठनको भलो गर्दैन । बिद्यार्थीको समस्यामा समाधानको अचुक औषधि बन्नुपर्ने अनेरास्ववियु आज यति धेरै निरीह कस्का कारण बन्दैछ कमरेड?
के अब अनेरास्ववियु नेताको भक्तिगान भजनमण्डली मात्रै हो? आज लाखौ विद्यार्थीले तपाईका गतिविधि नियालीरहेका छन। हिजो अनेरास्ववियृको अध्यक्षले के धारणा राख्थ्यो त्यसका आधारमा मुलुकको राजनिती बाटो र धारणा निर्माण हुन्थ्यो । तर आज तपाईको स्वार्थ आम विद्यार्थी पङ्ती बुझ्ने भैसकेका छन। शैक्षिक सस्थाहरु ढप्प छन आधाबर्ष यसै गहिसक्यो यो शैक्षिकसत्र यसै खतरामा परिसक्यो तर कमरेड तपाईलाई यसका निम्ति सोच्ने फुर्सदनै छैन। तपाईहरु त शतिशाल हो चट्टानमा उम्रेको हामीले बोलेको कुराले खै के अर्थ राख्ला र तैपनि खैर यो तपाईहरुको निजि रुचिको कुरा रह्यो त्यता म प्रबेश गर्न चाहन्न कमरेड तपाईं आफ्नो धरातलमा उभिनुहोस अनेरास्ववियृलाई बलात्कार नगर्नुहोस। कुशल नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भने छाडिदिदा उत्तम हुन्छ। बिबाद समाधान तिर भन्दा आफ्नो भजनमण्डली लाई उचाल्दै प्रशिक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईलाई तत्काल पिसाबको न्यानो त मिल्ला तर संगठनको हित गर्दैन।
तपाई भन्दा धेरै जिम्मेवार बहन गर्न सक्ने योग्य पात्रहरु नभएका होईनन। उनिहरु तपाईको अकर्मण्यताको कारण पेलिएको छ चेपिएको छन जबर्जस्त उत्पीडित छन। तपाईको भजन गाउने सबै ठिक तपाईंले नेताको भजन गाउदा पनि ठिक आलोचनात्मक सुझाब राख्यो कसैले भने उसलाई सिध्याउनै पर्ने कस्तो राजनिती ? कमरेड आफ्नै व्यवहार हेर्नुस। आफुले आफैलाई मुल्यांकन गर्नुहोस के नेता हो त तपाई? नेतामा हुनुपर्ने गुण छ?
नेतृत्व भनेको खाली उपद्रो मच्चाउने मात्र हो? लाखौ विद्यार्थीको भावना बोक्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने संगठन सोच्नुस त आज! इतिहासमा गणतन्त्रको निम्ति मशाल बोकेर साच्चै नै लोकतान्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी त्यस्तो कठिन र संगिन मोडमा रहदा पनि विद्यार्थी अधिकार स्थापित मात्रै हैन सस्थागत गर्न सफल नेतृत्वलाई सम्झनुहोस त? आज तपाईको पार्टी सरकारमा छ शैक्षिक मुद्दालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ स्पष्ट योजना तपाईं सङ्ग छन भने आन्दोलन नै आबश्यक छैन केही बुझाउन सक्दा मात्र उपलब्धि हुन्छ। तर तपाईमा खोइ विद्यार्थीपन खै शैक्षिक मुद्दा खै ठोश योजना केबल स्वार्थ बजाउने मात्र हो विद्यार्थी आन्दोलन इतिहासको निर्मम समिक्षा गर्नुहोस।
आफ्नो सोच र दृष्टिकोण परिबर्तन गर्नुहोस। तपाईहरुको लहडताले संगठनको अस्तित्व माथी प्रश्नै प्रश्न चाङ लागेका छन यो आन्दोलमा हिजो सरिक हुने र आज बुझ्ने आम जगतमा। के विद्यार्थी आन्दोलनको अबशानकै दिशामा हो? अनेरास्ववियृ बिगठन गरि दिदा पनि हुन्छ भन्दै बहस हुँदै गर्दा अलिकती पनि चेतना पलाउदैन? २०७६ जेष्ठ ३ गते संयोजक र सहसंयोगक जिम्मेवारी पाउनु भएपछि अलिअली आश त देखिएको थियो। तर त्यो तुसारापात लगाउनुभयो बल्ल बल्ल पौष १८ मा केन्द्रिय कमिटी टुङ्याउनु भयो। तपाईको जिम्मेवारी के हो जिम्मेवारी बहन गरेको देखियो त ? माघ ५ गते जिल्लाको संयोजक सहसंयोजक त टुंगोमा पुर्याउनु भयो तर खै सबै सम्रचना बनेत ? काम गर्ने र नगर्नेको मुल्यांकन भएको छ? हामी ब्यक्तिलाई बोक्दैछौ कि संगठन? जिम्मेवार कमरेडहरु जिम्मेवारी बहन गर्नुस आरोप प्रत्यारोपले अन्ततः संगठनलाई घाटा नै हो। आज शैक्षिक समस्या माथी समस्या देखिँदा तपाईहरुको ब्यक्तिगत बिज्ञप्ती होइन संगठनको बिज्ञप्ती चाहन्छौ हामि।
हामिलाई त संगठन बलियो भएको हेर्ने रहर छ तपाईको ब्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्ति भयो कि नाई यो हाम्रो बिषय होइन । म नेता बन्छु वा बन्दिन हैन प्रत्येक विद्यार्थीको भाबनामा अनेरास्ववियृ बगेको हेर्ने रहर छ। विद्यार्थी आन्दोलनको भुमिका बाट तपाइको कुशल नेतृत्व र भबिष्यको उदयमान नेतृत्व हो भन्ने हेर्ने रहर छ। तर तपाईका ब्यबहारले मेरो सपना केबल समनामै सिमित हुने निश्चित प्राय छ।
एउटा विद्यार्थीको सोचमा साच्चै हाम्रो हितमा काम गर्ने अनेरास्ववियृ हो भन्ने भए पुग्यो। आफ्नो जिम्मेवारी र मर्यादा तपाईले कायम राख्दा सम्म अरुले राख्ने हो त्यसैले आफ्नो कद आफै नघटाउनुहोस। एकताबद्ध अनेरास्ववियृ लाखौ विद्यार्थीको चाहना हो भबिष्य हो त्यसैले यी तमाम बिषयको चेतना राखेर नेतृत्व गर्न सफल हुनुहोस भोलि असक्षमताको ट्याग लागेर बिदा हुनुपर्यो भने त्यो भन्दा लज्जाको बिषय केही हुदैन। समयमै ख्याल गर्नुहोस कमरेड।
समय रहदै ख्याल गर्न सक्दा भवितव्यं दुर्घटना रोक्न सकिन्छ तर यसका बारेमा समयमै सचेत बहुदा इतिहामा धेरै ठूलो मुल्री चुकाउनु पर्छ ख्याल पुर्याउनु होस। पार्टी एकता भएको करिब ३ बर्ष र अनेरास्ववियु एकता भएको २ बर्ष हुन लाग्दा पनि म अनेरास्ववियु सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला सचिबको भुमिका मै छु मलाई अनेरास्ववियृ बनाईदिनुहोस। धन्यवाद
भण्डारी अनेरास्ववियु, जिल्ला सचिब हुन्
सुनकाेशीमा पहिराे,तीन घर पुरिए
लिदि पहिरोले बिचल्लीमा पारेकालाइ जुगल सरकारको साथ
२८ भाद्र २०७८, सोमबार ०६:३४ Janatapatra 0
अखिल क्रान्तिकारी सिन्धुपाल्चोककाे नेतृत्वमा क्षितिज
जनतापत्र, वलेफी । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) सिन्धुपाल्चोकको १९औं जिल्ला सम्मेलन अाईतवार बलेफीमा...